Abavelisi beemveliso kunye nababoneleli | Imveliso yase China
Umqolo Single iibheringi mqengqeleki tapered
Imiqolo kabini mqengqeleki tapered iibheringi
Umgangatho ophezulu we-tapered roller
Umqolo kabini mqengqeleki tapered b ...
Umgangatho ophezulu we-roller tapered
umqolo omnye mqengqeleki tapered b ...
Ukukwazi ukuthwala iibheringi ezinomqolo omnye ukuthwala umthwalo we-axial kuxhomekeke kwikona yoqhakamshelwano, okt i-engile yomjikelo wendlela ojikelezayo. Eyona mkhulu i-engile, ubukhulu bomthwalo we-axial umthwalo. Iibheringi ze-roller ezisetyenzisiweyo kakhulu zineebheringi zeeroli ezizodwa. Kwinqwelo yevili langaphambili lemoto, kusetyenziswa ubungakanani obuncinci obunemigca emibini eqengqelekayo. Iibheringi ezinemigca emine ezinamacala asetyenzisiweyo zisetyenziswa koomatshini abanzima njengamashishini amakhulu aqengqelekayo ashushu.
Umqolo kabini iibheringi mqengqeleki tapered
Iibheringi mqengqeleki tapered libhekisa radial iibheringi ziqengqelekayo izileyi tapered. Kukho iindidi ezimbini: ikona encinci yekona kunye ne-engile enkulu yekona. I-engile encinci yekona ithwala umthwalo we-radial kunye ne-axial ngokudibeneyo ngokusekwe kumthwalo we-radial. Ihlala isetyenziswa ekusetyenzisweni kabini kunye nokubuyela umva kufakelo. Umdyarho wangaphakathi nangaphandle unokufakwa ngokwahlukeneyo. Ukucoca i-radial kunye ne-axial kunokulungiswa ngexesha lofakelo kunye nokusetyenziswa; I-angle enkulu ye-taper ithwala umthwalo we-axial kunye ne-radial ngokusekwe kumthwalo we-axial. Ngokubanzi, ayisetyenziselwa ukuthwala umthwalo ococekileyo we-axial wedwa, kodwa inokusetyenziselwa ukuthwala umthwalo ococekileyo xa usenziwa ngababini (iziphelo zegama elifanayo zifakwe ngokuhambelana).
Iiringi zangaphakathi nezangaphandle zinemizila yokurhafisa, kwaye kukho iiroller ezinamacwecwe phakathi kweendlela. Ukuba umphezulu opeyintiweyo uyandiswa, uya kuthi ekugqibeleni uhlangane kwindawo ekwi-axis ethweleyo. Iibheringi mqengqeleki tapered ubukhulu becala asetyenziselwa ukuthwala imithwalo ezihlangeneyo yezihlunu kunye yezihlunu, ikakhulu imithwalo zeradial. Umthwalo wokuthwala we-axial wokuthwala umiselwa yi-engile yokudibana, inkulu i-eriyali ye-eriyali, kokukhona umthwalo we-axial uthwala Iibheringi mqengqeleki Tapered iibheringi ngokwahlukana. Iringi yangaphakathi eneziqengqeleki kunye nekheyiji yinto engaphakathi, enokufakwa ngokwahlukeneyo kwindandatho yangaphandle. Olu hlobo lokuthwala lunokunciphisa ukufuduka kwe-axial kwelinye icala leshafti okanye indlu, kwaye ayivumeli ishafti ithambeke xa kuthelekiswa nomngxuma wezindlu. Ngaphantsi kwesenzo somthwalo we-radial, amandla ongezelelweyo e-axial aya kwenziwa. Ke ngoko, ngokubanzi kwiibheringi ezimbini zokuthwala, umsesane wangaphandle kunye nomsesane wangaphakathi wokuthwala ufakelwe ngokuhambelana nobuso bokugqibela.
umqolo omnye iibheringi mqengqeleki tapered
IDILESI Inombolo ye-181, i-Changjiang Road, indawo yoPhuhliso lwezoQoqosho kunye neTekhnoloji, eShandong, China
Self-Aligning Ball Ukunikela, Iibheringi ezijikelezayo ezinzima, Inch eyodwa Umqolo, Pin mqengqeleki iibheringi, Gcwalisa ngokupheleleyo iibheringi zebhola, Ukucwangciswa kweTaper Roller,